Translate and i explained to him quickly in Burmese
Results for and i explained to him quickly , translation from English to Burmese
တပည့်တော်တို့ထံသို့ ဆောင်ခဲ့၍ သူတို့သည်ချမ်းသာမပေးနိုင်ကြပါဟု လျှောက်လျှင်၊
သခင်က၊ သင်သည် မြို့ငါးမြို့ကိုအုပ်စိုးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
And I am going to kick out bloody myself, the useless eater.
အကျွန်ုပ်အဆွခင်ပွန်းတယောက်သည် ခရီးမှလာ၍ အကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်ပါပြီ။ သူ့ကို ကျွေးစရာ မရှိသောကြောင့် မုန့်သုံးလုံးချေးနှင့် ပါဟုဆိုသော်၊
စကားအသံသည်လည်း၊ ပေတရုထ၍ သတ်စား လော့ဟု လာ၏။
သူငယ်အစ်မလည်း အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို သိမြင်ခြင်းငှါ အဝေး၌ ရပ်နေလေ၏။
သူ၏ ရန်သူတို့ကို သူ့ရှေ့မှာ ငါနှိပ်စက်၍၊ သူ့ကိုမုန်းသော သူတို့ကို ဒဏ်ခတ်မည်။
ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊
ထိုအခါ ထာဝရဘုရားကို ငါတောင်းပန်သည် ကား၊
ငါ၏အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။
ဆည်းကပ်သည်အကြောင်းကား၊ သူတို့ကို မိန်းမောတွေဝေစေ ခြင်းငှါ ထိုသူသည် နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ် အားဖြင့် ကြာမြင့်စွာပြုလျက်နေ၏။
gujarati essay bin chepi rog (English>Gujarati)como se dice matematicas en kechua (Spanish>Quechua)sola hajar rupay ko english me (Hindi>English)muje thodi bhout punjabi aati hai (Hindi>English)what is my importance in your life (English>Hindi)ap mera wait karna plz (Hindi>English)advertisement on soap (English>Hindi)jangan jadi bodoh kerana cinta (Malay>English)bakit hindi mo pa pinapalitan (Tagalog>English)anu ang kahulugan ng elebasyon (Tagalog>English)ni (Indonesian>Chinese (Simplified))hovedstaden (English>German)perilla seeds meaning in tamil (English>Tamil)ele vai dormir À meia noite (Portuguese>English)mallepuvvu english name translate (Telugu>English)aapke husband kaha hai (Hindi>English)yo quiero un perro como este (Spanish>English)ci scusiamo per la dimenticanza (Italian>English)音调 (Chinese (Simplified)>Malay)meam (Hungarian>Finnish)szocho kedvezmények (Hungarian>English)senza targa anterioreeposteriore (Italian>German)extensibility (English>Chinese (Simplified))dipantau dipantau (Malay>Chinese (Simplified))current crush and relationship? (English>Hindi)